Wararka - Maxay yihiin noocyada qaboojiyeyaasha warshadaha ee qalabka qaboojinta dhirta, iyo dhibcaha rakibidda?
Ka mid ah qalabka qaboojinta dhirta, waxaa jira qeexitaano iyo moodello badan oo qaboojiyeyaasha hawada uumi baxa, moodello kala duwan iyo qeexitaanno, waxqabadka qiimaha sare ee suuqa iibka, iyo dalabyo ballaaran oo kala duwan. Waa qalab qaboojiye dhir leh xulasho sare.
Maaddaama ay tahay shirkad ganacsi duug ah oo leh 13 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah, Xikoo uumi-baxa Hawo-qaboojiye ah ayaa lagu sifeeyay qaboojiyaha hawada qalabka qaboojinta ee geedka:
Flow Qaboojiyaha hawada uumi baxa ah ee qulqulka: ku habboon goobaha leh danab dhexdhexaad ah oo shaqeynaya iyo qulqul ballaaran.
Ler Qaboojiyaha hawada uumi baxa ee bartamaha: ku habboon goobaha leh mugga hawo yaraanta iyo cadaadiska shaqada ee sarreeya;
Fan Mashiinka mashiinka qaboojiye ee qiiqa badan: Caleen qaansheegad u gaar ah waxaa wada farqiga cadaadiska gaaska banaanka, kaas oo ku wareegaya udub-dhexaadka, ka dibna bixiya ilaalinta deegaanka iyo qalabka hawo-abuurka dabiiciga ah ee keydinta tamarta leh tayada hawada gudaha.
Qodobbada ugu muhiimsan ee rakibaadda qaboojiyaha hawada uumi baxa:
Dusha sare waa in la simaa si looga fogaado daadashada biyaha;
Rakibaadda qaboojiyaha hawada ee saqafka waa inuu ka sareeyaa saqafka fidsan, oo boorarka barroosinka waa in horay loo sii geliyaa, oo boorarka barroosinka lagu xiraa maydhashada guga si looga fogaado inay dabcaan inta lagu jiro dalabka;
Dhexroorka tuubbada ee hawo-mareenka lama dhimi karo, laakiin waa la kordhin karaa oo keliya. Shabakad hadh leh waa in la dhejiyaa, oo dabaysha iyo daboolka roobka waa in la qaadaa markay dabayshu culus tahay;
Lakab ka samaysan suuf caag ah oo milimitir ah ayaa la kiciyey inta u dhexeysa salka qaboojiyaha hawada uumi baxa iyo salka si loo yareeyo gariirka;
Industry Warshadaha Xikoo uumi-baxa qaboojiyaha hawadu wuxuu kuxiranyahay marinka hawo qaadashada adoo adeegsanaya tuubo jilicsan (alaab ceyriin oo jilicsan oo aan shidneyn), dhererku waa inuusan ka yaraan 200mm, dhexroorka dhuumaha ayaa la mid ah soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga qeexitaankiisa saqafka hawada qaboojiyaha. Si loo hubiyo in tuubadu aysan u muuqan inay qalloocan tahay inta lagu gudajiro dhammaan howlaha nidaamka softiweerka, waa in si habboon loo rakibaa. Tuubada cad ee shiraacda ah ee lagu rakibay dhamaadka nuugista qaboojiyaha hawada uumi baxa ee Xikoo, waa lagu rakibi karaa wax yar oo adag si looga hortago in qaboojiyaha hawada uumi baxa ee Xikoo la nuugo inta lagu jiro hawlgalka isla markaana la yareeyo qeexitaanka qaybaha kala duwan ee tuubada shiraaca cad.
Hanuuninta gaarka ah ee farsamada ee meeldhexaadka ah ee warshadaha Xikoo:
Hordhac: Xaaladaha caadiga ah, Qaboojiyeyaasha hawada uumi baxa ee 'Xikoo' waxay leeyihiin xaalado heerkulkeedu sarreeyo markii ay ka hawlgalayaan heerkulka qolka, laakiin dhammaantood waxay ku jiraan heerka caadiga ah. Sababtoo ah qaybaha qalabka ayaa is xoqaya, taasoo dhalisay kuleyl abuur iyo heerkulka sare ee qolofka. Laakiin macnaheedu maahan in heer kulku aad u sarreeyo.
Qaboojiyaha hawada uumiga ah heerkulka xayndaabka qalabka qaboojinta dhirta ayaa ka batay qiimaha caadiga ah. Sababaha ugu muhiimsan waa sida soo socota:
Pressure Cadaadis shaqo oo hooseeya oo beddelaya korontada;
Motor Mashiinka ayaa ka baxay wajigii jimicsiga jirka ama fiilooyinku waa khaldan yihiin;
Mashiinka wareejinta ee mootada ayaa burburay, oo nadiifinta wadashaqeynta labada dhinac waa yar tahay, oo aan buuxin shuruudaha;
Resistance Cadaadiska isdifaaca ee barnaamijka softiweerku waa mid aad u ballaaran ama qaboojiyaha hawada oo si cilmiyaysan loo rakibay mootadana la buux dhaafiyay. Sababta ayaa ah isku dheelitirnaanta iska caabinta ee shabakadda dhuumaha ayaa aad u ballaaran ama waalka furaha albaabka lama furin.